Kai Ken inu dia vondrom-piarahamonina tarihin'i DeFi. Isaky ny varotra, misy andraikitra telo tsotra: ny firoboroboan'ny Burn, LP, ary ny fampandrosoana. Amin'ny alàlan'ity modely tokenomics ity, ny tetikasa dia mahazo tombony manontolo amin'ny fifanakalozana tokana. Ny fifampiraharahana Kai ken dia mahazo tombony amin'ny tompon-trano REHETRA.
Ity token ity dia mikendry ny hanome valisoa ireo tompona ary hanasazy ireo mpivarotra. Ho an'ny fifanakalozana rehetra, ireto hetra manaraka ireto dia ampiharina:
Rehefa mividy ny famantarana mandritra ny varotra ampahibemaso ny mpampiasa vola:
1% dia mankany amin'ny kitapom-bolan'ny marketing
1% mankany amin'ny LP
1% mandeha handoro adiresy poketra
2% dia mankany amin'ny mpihazona
Rehefa mivarotra ny famantarana mandritra ny varotra ampahibemaso ny mpampiasa vola:
2% - 7% dia mankany amin'ny tompona arakaraka ny Et mitovy amin'ny totalin'ny varotra hataon'ny mpivarotra. Ny fifanarahana dia hamaritra ny Et mitovy ary esorina ny% izay alain'ny mpihazona.
Ny 2% - 7% izay mankany amin'ny tompona isaky ny varotra mivarotra dia singa iray mbola tsy nampiharina. Ity endri-javatra ity dia miavaka ary izy no hita voalohany amin'ity marika ity.
Seho sy fanavaozana amin'ny ho avy:
Fambolena alika. Ho dobo fiompiana LP io. Kaiken INU dia azo ampiarahina amin'ny Eth, USDT ary vola hafa miorina amin'ny fiompiana Kaiken INU. Kaiken INU dia hiara-hiasa amin'ny marika hafa amin'ny fijanonana.
Trano alika. Dog House dia ho marika voafetra iray hafa ihany koa fa rehefa ampiarahina amin'i Kaiken Inu ao amin'ny Dog Farm, dia hampitomboany avo roa heny ny herin'ny stalking.
Puppies Crypto. Ity dia ho famantarana iray hafa azo raisina amin'ny alàlan'ny fijanonana Kaiken INU miaraka amin'ny mari-pamantarana hafa. Ireo alika kely crypto ireo dia mety ho lasa NFT azo amidy
Sakafo alika. Vidina hamelomana ireo alika Crypto ireo mba hitomboany haingana.
Vitamina alika. Ity dia ho famantarana iray hafa izay hanome sakafo ho an'ireo alikakely crypto.
KAI Eco App. Ity no fampiharana finday ofisialin'ny tetikasa Kaiken Inu.
Fivarotana tsy miankina amin'ny $ 7 isaky ny famantarana 1 miliara.
Amidy mialoha amin'ny $ 10 isaky ny token 1 miliara amin'ny alàlan'ny dxsale.
Varotra ampahibemaso amin'ny $ 12 isaky ny famantarana 1 miliara
% Fitsinjarana. Tsy azo ampiharina izany mandritra ny varotra ampahibemaso fa tsy fivarotana presale na fivarotana manokana.
Ny tanjonay dia ny hisongona an'i Kishu sy Shib Inu amin'ny lafiny tompony sy ny march. Dingana kely no ataontsika.
2021 Q3 1. Fandraisana andraikitra voalohany
• Famoronana tranokala
• Fampiasana fifanarahana
• Famoronana kaonty media sosialy
• Fivarotana tsy miankina
• Famarotana mialoha ny besinimaro
• Fampiharana CG
• Fampiharana CMC
• Fampivoarana Wallet Kai Eco
• CEX (lisitra 1-3)
• Fampivoarana ny fiompiana alika
2021 Q4 2. Fanangonana
• Fametrahana alika amin'ny alika
• Lisitra CEX (lisitra 1-2)
• Marketing amin'ny media sosialy
• Fampiasana trano alika
• Vaovao farany Kai Eco Wallet
2022 Q1 3. Fitomboana
• Fampandrosoana Crypto Puppies
• Fampivoarana otrikaina alika
• Fampivoarana ny sakafon'ny alika
• Lisitra CEX (1 amin'ny top 5)
• Vaovao farany Kai Wallet
2022 Q2 4. Fivoriambe
Apetraho amin'ny toerana sahaza azy ireo sombin-javatra rehetra ary atombohy ny fananganana ny Ecosystem KAI.
Fivarotana tsy miankina ICO
Te-tanisao ny ICO?
Tanisao ny ICO Androany amin'ny tranokalanay ary mahatratra mpampiasa vola an'arivony avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ary koa, manome ny haingana indrindra izahay izao Serivisy KYC ho an'ny ICO. Fenoy ny contact contact anio ary hifandray aminao izahay afaka 24 ora.